DHAAYAHA SAXAAFADDA Q-10AAD W/Q: Xasan Maxamed Xaaji “Duusoos” | Laashin iyo Hal-abuur
DHAAYAHA SAXAAFADDA Q-10AAD W/Q: Xasan Maxamed Xaaji “Duusoos”
In kasta oo billowga taariikhda filimada farshaxanka leh aan si cad loo qeexin, haddana ganacsiga, baaritaanka guud ee toban ka mid ah walaalaha ‘Lumière’ filimyadoodii gaagaabanaa ee Paris bishii Diseembar 28, 1895, waxaa loo qaadan karaa inay horumar u yihiin filimada la saadaaliyay. Waxaa jiray natiijooyin hore oo filim ah iyo baaritaanno ay sameeyeen kuwa kale, balse, kama aysan helin tayo, taageero dhaqaale, adkeysi ama nasiib u helidda xoog ku kaxeeya shineemada Lumière guusha adduunka.
Muddo yar ka dib, shirkadaha soo saara filimada iyo istuudiyaha ayaa laga aasaasay adduunka oo dhan. Intii lagu gudajiray tobankii sano ee ugu horeysay filim sameynta, filimka waxaa laga soo arkay sheeko cusub ilaa warshad madadaalo ballaaran oo la aasaasay. Filimadii ugu horreeyay waxay ahaayeen madow iyo caddaan, muddo dheer oo daqiiqad ah oo aan lahayn cod duuban waxayna ka koobnaayeen hal xabbad oo kamarad joogto ah.
Heshiisyada ka dhanka ah luqadda guud ee filimka ayaa la soo saaray sanadihii la soo dhaafay iyada oo la adeegsanayo tafatirka, dhaqdhaqaaqa kaamirada iyo farsamooyinka kale ee filimada kuwaas oo gacan ka gaystay doorar gaar ah oo ku saabsan sheekada filimka.
Saameyn gaar ah waxay ku noqotay muuqaal filimada ilaa dhammaadkii 1890-kii oo ay caan ku ahaayeen filimaanta khiyaaliga ah ee Georges Méliès. Dhibaatooyin badan ayaa ahaa wax aan macquul aheyn ama aan macquul aheyn in lagu ciyaaro riwaayadaha sidaas darteedna waxay ku kordhiyeen sixir badan khibradaha filimada.
Horumarka farsamada ayaa kordhiyay dhererka wuxuu gaadhay 60 daqiiqo filim muuqaal ah sanadkii 1906-dii duubista maqalka oo la isku duubay; guud ahaan tan iyo dabayaaqadii 1920-kii, midab guud ahaan tan iyo 1930-kii iyo 3D guud ahaan tiyaatarrada horraantii 1950-kii iyo ilaa 2000-kii tirada. Dhawaqa ayaa soo afjaray baahidii loo qabay nasashada kaararka cinwaanka, wuxuu is beddel ku sameeyay fursadaha sheeko ee filim sameeyayaasha wuxuuna noqday qayb muhiim ka ah filim sameynta.
Warbaahinta cusub ee caanka ah oo ay ku jiraan telefishanka guud ahaan tan iyo 1950-yadii, fiidiyowga guriga guud ahaan tan iyo 1980-dii iyo internetka guud ahaan tan iyo 1990-ki ayaa saameyn ku yeeshay qaybinta iyo isticmaalka filimada. Soosaarka filimku wuxuu sida caadiga ah kaga jawaabi jiray nuxurka ku habboon warbaahinta cusub iyo hal-abuurnimada tikniyoolajiyadda oo ay ku jiraan shaashad ballaaran guud ahaan tan iyo sannadihii 1950-meeyadii, 3D iyo 4D filim iyo filimmo aad u qurux badan oo lagu ilaalinayo baaritaanka masraxa mid soo jiidasho leh.
Nidaamyo ka raqiisnaa oo si fudud loo maareeyay oo ay ku jiraan filimka 8-mm, fiidiyowga iyo kamaradaha casriga ah ayaa suuro geliyay tirada sii kordheysa ee dadku inay abuuraan filimaan tayo kala duwan leh, ujeeddooyinka oo dhan oo ay ku jiraan filimada guriga iyo farshaxanka fiidiyaha ah. Tayada farsamadu inta badan way ka yaraayeen filimada xirfada leh, balse, waxaa lagu hagaajiyay fiidiyowga dhijitaalka ah iyo kamaradaha dhijitaalka ah oo tayo sare leh. Horumarinta waqtiga ayaa ka dhigtay hababka wax soo saarka dhijitaalka ah kuwo aad iyo aad caan u ah intii lagu jiray 1990-meeyadii, taas oo keentay natiijooyin muuqaal ah oo sii kordhaya iyo animations-ka kumbuyuutarka ee caanka ah oo leh dherer muuqaal ah.
Noocyada filimada kala duwan ayaa soo ifbaxay kuna riyaaqay heerar kala duwanaansho oo guul ah xilli ka dib, kala duwanaansho weyn ayaa u dhexeeya tusaale ahaan filimada naxdinta leh; guud ahaan tan iyo 1890-kii, joornaallada oo ku badnaa shineemooyinka Mareykanka intii u dhaxeysay 1910-meeyadii iyo dhammaadkii 1960-yadii), muusikada tan guud ilaa dabayaaqadii 1920s iyo filimmada qaawan oo la kulma da’ dahab ah intii lagu jiray 1970-dii.
Qaar ka mid ah fiirsashada ilaahyadii hore iyo jinniyo ayaa laga yaabaa inay leeyihiin been lagu rinjiyeeyay muraayadaha (concave) muraayadaha, kamaradda obscura ama mashruuc aan la aqoon. Ilaa qarnigii 16-aad iyo xafladaha sixirka Necromantic ee muujinta naxdinta leh ee “sixirroolayaasha” iyo “saaxiriinta” ayaa u muuqday wax iska caadi ah. Bandhigyadii sixir-bararka ee ugu horreeyay waxay u muuqdaan inay dhaqankan sii wateen iyadoo lagu sii wado sawirrada dhimashada, wuxuush iyo astaamo kale oo cabsi leh.
Qiyaastii 1790-kii, sheekooyinka warbaahinna badan ayaa lagu soo saaray muuqaallada Ghost ee loo yaqaan ‘Phantasmagoria’. Bandhigyadani waxay leeyihiin muqaallo macaamiil farsamo ahaan ah, saadaasha dambe, mashruucyada moobiilka, dul-saar, xallinta, jilayaasha nool, qiiqa mararka qaarkood sawirrada laga soo qaado, urta, dhawaaqyada iyo khataraha korantada. In kasta oo muuqaalladii siraad sixir ee ugu horeeyay ay u muuqdaan kuwo been sheegaya oo looga golleeyahay in lagu cabsi galiyo dhagaystayaasha, haddana dhaqso badan iyo maaddooyin badan ayaa kasoo muuqday laambadaha loo isticmaalay kaliya sheeko qoridda iyo sidoo kale waxbarashada.
Qarnigii 19-aad, tiro siraaddo cusub oo caan ah ayaa soo saaray farsamooyin ay ku jiraan aragtiyada xallinta iyo dhowr nooc oo ah bogagga mashiinka oo abuuray saamayn dhalaalaysa Abstract (chromatrope, iwm.) Ama tusay tusaale ahaan baraf dhacaya ama meerayaasha iyo dayaxyadooda oo wareegaya jawiga loo baahan yahay.
Jaangooyooyin sawir hore ah oo loo yaqaan: ‘chronophotography’, ayaa ka maqnaa qaab sheeko oo halis ah. Nidaamyadan badankood markii hore looma jeedin in lagu arko dhaqdhaqaaq waxaana loo soo bandhigay qaab dhab ah, xitaa saynis ah, habka lagu baranayo dhaqdhaqaaqa. Isku xigxiga wuxuu ku dhowaad si gaar ah ugu lug lahaa aadanaha ama xayawaanka oo sameeya dhaqdhaqaaq fudud kamaradda horteeda. Laga soo billaabo 1873-dii sawir qaade Eadweard Muybridge wuxuu billaabay inuu sameeyo boqollaal daraasado taariikhi ah oo ku saabsan dhaqdhaqaaqa xayawaanka iyo aadanaha waqtiga dhabta ah. Waxaa si dhakhso leh u raacay sawir qaadayaasha kale sida Étienne-Jules Marey, Georges Demenÿ iyo Ottomar Anschütz.
Sannadkii 1878-dii Muybridge wuxuu daabacay natiijooyinkii ugu horreeyay ee waxbarashadiisa sida kaararka golaha fardaha ee ‘Horse in Motion’. Iyagoo adeegsanaya qalab loo yaqaan ‘zoetrope’, daawadayaashu waxay dhigayaan sawirrada sawir-gacmeedka u eg sawir-gacmeedka waxayna ku daawanayaan iyaga oo dhaqdhaqaaq sameynaya. Muddo dheer ka dib soo bandhigida shineemada, duubista Muybridge ayaa mararka qaar lagu soo bandhigi jiray aflaam aad u gaagaaban oo dhaqdhaqaaq hufan leh inta badan muuqaallada waxaa loo soo bandhigi jiray sidii loob soo celiya dhaqdhaqaaqa si siman.
1890-yadii, filimada badanaa waxaa laga daawanayay iyadoo la adeegsanayo goobo ku meel gaar ah iyo bandhigayaal socdaal ah ama “doqon” ah oo lagu jilayo barnaamijyada vaudeville. Filimku wuxuu ka yaryahay hal daqiiqo oo badanaaba wuxuu soo bandhigayaa hal muuqaal oo sax ah ama marxalad gaar ahaaneed oo ah nolol maalmeedka, dhacdo dadweyne, dhacdo isboorti ama dharbaaxo kale oo la jilayo. Ma jirin wax farsamo filim ah oo aan yareyn, filimku badanaa wuxuu ahaa madow iyo caddaan wuxuuna ahaa dhawaq la’aan.
Sannadihii xigay, farshaxanka filimka dhaqaaqa ayaa si dhaqso leh uga socday ficil ugub ah una wareegey warshad madaddaalo baaxad weyn leh. Filimadu waxay ka soo baxeen hal tallaal oo gebi ahaanba uu sameeyay hal qof oo leh kaaliyeyaal yar, xagga sawirada oo ahaa dhowr daqiiqo oo dherer ah oo ka koobnaa dhowr xabbadood iyo sheeko.
Cusbooneysiinta sawirrada dhabta ah ee dhaqdhaqaaqa ayaa ku filnaaday in warshadaha sawir-dhaqaaleedka ay u baxaan ka hor dhammaadka qarnigaas, waddamada adduunku. “Shineemo” waxay ahayd inay soo bandhigto qaab raqiis ah oo fudud oo dadka madadaalada lagu siiyo. Filim sameeyayaashu waxay duubi karaan waxqabadka jilayaasha, taas oo markaa loo soo bandhigi jiray daawadayaasha adduunka. Safarradu waxay ku soo jiiidan jireen indhaha meelaha fog-fog, dhaqdhaqaaq, si toos ah magaalooyinka ay u daawadaan daawadayaashu. Filimadu waxay noqdeen qaabka farshaxanka muuqaalka ee ugu caansan dabayaaqadii da’da Fiktooriya.
Masraxa Jiilaalka ee loo yaqaan ‘Wintergarten’ ayaa lagu qabtay bandhig faneed hore daawadayaasha hortooda oo ay muujiyeen walaalaha Skladanowsky sannadkii 1895-tii. Melbourne Athenaeum waxay billawday inay soo bandhigto filimada 1896-dii. Tiyaatarrada filimadu waxay noqdeen goobo madaddaalo oo caan ah iyo xarumaha bulshada billowga qarnigii 20-aad, kaabayaal iyo tiyaatarrada kale.